Galaxy Nexus I9250မှာ Android 4.4 KitKat တင်လို့ရပြီ။ – Trend.com.mm
Galaxy Nexus I9250မှာ Android 4.4 KitKat တင်လို့ရပါပြီ။ XDA ၀ဘ်ဆိုဒ် အသိအမှတ်ပြု developer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ PlayfulGod ဟာ CyanogenMod 11 (CM11) ROMကိုတင်ထားပါတယ်။ CM11ရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Android 4.4 KitKat updateကို ရရှိနိုင်ပါပြီ။
ပိုမြန်ဆန်တဲ့ multitasking အပါအ၀င် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အသွင်အပြင်သစ် တချို့ကို Andriod 4.4 KitKat မှာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ 3D စတိုင်၊ ခေတ်ပိုဆန်တဲ့ ဖုန်းဒိုင်ခွက် နဲ့အတူ Google Now စနစ်ကိုလည်း ချဲ့ထွင်ထားပါတယ်။ OK Google တန်းပြောလိုက်ရုံနဲ့ google search လုပ်ခိုင်းလို့ရသွားပါပြီ။
စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ CM11 ROM တင်နည်းကို တဆင့်ချင်းလိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Galaxy Nexus I9250 အတွက်သာ ဖော်ပြပေးထားကြောင်း သတိပြုပါ။
. Android 4.4 CyanogenMod 11 ROM
. Back up data and settings
ClockworkMod (CWM) recovery toolကိုသုံးပြီး လက်ရှိ ဖုန်းအနေအထားအတိုင်းပြန်သုံးချင် သုံးနိုင်အောင် backup လုပ်ထားပါ။
. Contacts ဖုန်းနံပါတ်တွေကို Contact setting ကနေ Export contacts storage လုပ်ထားပါ။
. ချိတ်မယ့် ကွန်ပျူတာမှာ USB driver မှန်မမှန်စစ်ပါ။ USB debugging လုပ်ထားဖို့လည်း လိုပါတယ်။driver မမှန်ရင် Galaxy Nexus USB Driver ကိုဒီနေရာမှာ downloadလုပ်ပါ။
. ROM install လုပ်နေတုန်းမှာ ဘက်ထရီကုန်သွားရင် မမျှော်လင့်တဲ့ စက်ကျမှုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အနည်းဆုံး ဘက်ထရီ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ပါ။
. နောက်ဆုံးထွက် CWM Recovery (v.6.0.4.5)နဲ့ root လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။
.ROM အသစ်တင်ပြီးသွားရင်တော့ စက်တည်ငြိမ်မှုရှိသွားအောင် ၅မိနစ်လောက် စောင့်ပြီးမှသုံးပါ။ ခဏတော့ လေးနေပါလိမ့်မယ်။
. Android 4.4 KitKat CyanogenMod 11 Rom for Galaxy Nexus I9250
. Cyanogen Mod 10.2 Nightly for Galaxy Nexus I9250
. CWM Zawgyi
အဆင့် ၁။ ဒေါင်းထားတဲ့ Android 4.4 KitKat ကို ကွန်ပျူတာထဲထည့်ပါ။
အဆင့် ၂။ Google Apps package ကို ဒေါင်းပါ။
အဆင့် ၃။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖုန်းကို ချိတ်ဆက်ပါ။ ဒေါင်းထားတဲ့ firmware zip နဲ့ Google Apps zip တွေကိုဖုန်း storage ထဲကို zip မဖြည်ဘဲ ကူးထည့်ပါ။
အဆင့် ၄။ ထည့်ပြီးရင် ဖုန်းပိတ်လိုက်ပါ။
အဆင့် ၅။ ပါဝါ ခလုတ် + အသံတိုး ခလုတ် + အသံလျှော့ ခလုတ် သုံးခုတွဲဖိပြီး Galaxy Nexus Logo ပေါ်လာတဲ့အထိ ဖိထားပါ။
အဆင့် ၆။ ခလုတ် သုံးခုလုံးကို ပြိုင်တူလွှတ်ပြီးရင် Recovery Mode ထဲဝင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အသံခလုတ်တွေကို သုံးပြီး optionတွေကြားရွှေ့နိုင်ပြီး လိုချင်တဲ့ option ရောက်ရင် ပါဝါခလုတ်နဲ့ ၀င်လို့ရပါတယ်။
အဆင့် ၇။ Wipe data/Factory reset လုပ်လိုက်ပါ။ app, setting, game ဖိုင်တွေပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် ၈။ CWM recovery main menu ကိုပြန်သွားပြီး Mounts and Storage ကတဆင့် Format System လုပ်၊ yes နှိပ်ပါ။ Wipe Cache Partition ကိုထပ် လုပ်ပါ။ CWM recovery ရဲ့ Advanced ကနေတဆင့် Wipe Dalvik Cacheကို ထပ်ရွေး yes လုပ်ပါ။
အဆင့် ၉။ Install Zip from sdcard ကိုရွေး၊ Choose zip from sdcard ကိုဝင်။ Cyanogenmod 11 zip ဖိုင်ထားရာနေရာကို ဖွင့်ပြီး firmware install လုပ်ဖို့အတွက် Yes နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
အဆင့် ၁၀။ အဆင့် ၉အတိုင်း Google Apps zip ကိုရွေး တင်ပါ။
အဆင့် ၁၁။ အဆင့် ၉ အတိုင်း CWM Zawgyi ကို ရွေးတင်ပါ။ မြန်မာ ဖောင့်အတွက် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် ၁၁။ Google Apps ကိုတင်ပြီးတာနဲ့ ++++Go Back++++ကိုရွေးပြီး reboot လုပ်ပါ။ ပထမဆုံးအကြိမ် boot ပြန်တက်ဖို့အတွက် ၅မိနစ်လောက် ကြာပါလိမ့်မယ်။
Android 4.4 KitKat ရဲ့ အရသာကို အပြည့်အ၀ခံစားကြည့်ဖို့ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။